Ndọghachi azụ nke ndị uweojii na-eji Igwefoto Igwe - OMG Solutions
O doro anya na ndị na-akwado ndị uwe ojii na-ahụ maka ịba ụba nke ndị uwe ojii nwere ike ịhụkwu ndị uwe ojii ka ha na-ese kamera. Ọ bụghị naanị na e nwere ụfọdụ ihe akaebe na ndị uwe ojii na-etinye kamera na - enye aka na mbelata nke ihe ndị uwe ojii ji eme ihe, mana ihe osise sitere na igwefoto ndị uwe ojii enyegokwala ihe ngosi bara uru nye ndị na - enyocha ebubo na-adịghị mma maka ndị uwe ojii. N’agbanyeghi uru ndi ese foto nke ndi uwe ojii nwere, enwere ihe nzuzo di egwu ekwesiri itule ma lebara ya anya ka ha na eme kari.
Isi igwefoto eyi
Ndị ụlọ ọrụ na-etinye iwu na gburugburu ụwa na-amalite iji kamera mmadụ iji nyochaa mmekọrịta nke ndị uwe ojii na ọha na eze, ngwaọrụ ndị a na-etinye n'igbe na-emewanye ka ha banye n'ụlọ akwụkwọ ọha.
Nyocha nke mbụ nke teknụzụ a nwere oke; ụfọdụ nchọpụta ama ama n’oge na-adịbeghị anya enyerela anyị aka ịma banyere mmetụta igwefoto ndị mmadụ na-eyi. Ugbu a igwefoto kachasị ọhụrụ bụ Mini WIFI / GPS / 3G / 4G / Ekwentị ikuku nwere ike ịdabere na ngwa ugogbe anya maka anwụ, kegidere ya na okpu ma ọ bụ jikọtara ya na akwa uwe, ma ọ bụ na eriri akpa ma ọ bụ n'apata ụkwụ, ma ọ bụ kwụgide n'olu dịka igwefoto ahụ nwere akara. . Ntọala nke ihe ndekọ a bụ ebe nchekwa. Ndị isi ọrụ nwere ike na-eyi kamel n'oge ọrụ ha. Batrị ndị ahụ dịruru ihe dịka 12 awa. Ngwaọrụ ahụ nwere ike ịdekọ vidiyo dị elu, ọbụlagodi ọnọdụ ebe ọkụ dị ntakịrị ma ọ bụ zuru oke
Ndepụta nke Cons nke Police Police Cameras
N ’igwe mkpanaka, kamera nwere ahu nwere ike ibu“ ngwa agha ”nke eji eji teknụzụ SPF kwalite oru oma nke ndi uwe ojii na Singapore. Thebawanye n’iji igwefoto ahụ na-eyi n’iru site n’aka ndị ụlọ ọrụ mmanye iwu karịrị ndị otu nyocha nyocha na-enyocha njikọ dị n’etiti teknụzụ na nsonye iwu. Ojiji igwefoto ndi uwe ndi uwe n’aja bu okwu ogwu. Ọ nwere ike inwe ụfọdụ mmetụta dị mma site n'echiche nnwere onwe obodo kamakwa ọ nwere ụfọdụ isi na-adịghị mma.
1. Ọ na-arụ ọrụ naanị mgbe onye uwe ojii na-eji ya nke ọma.
Akọ bụ otu n'ime ihe dị oke mkpa nke igwefoto ahụ maka ọrụ ndị uwe ojii. Nhọrọ a na-enye ohere maka akụrụngwa idekọ, na-arụ ọrụ na-aga n'ihu mgbe ị na-echekwa oge 20 kachasị ọhụrụ na sekọndrị 30. Ọ bụrụ na onye uweojii ahụ na-agbanye ihe ndekọ ahụ, a na-echekwa data ahụ. Ọ bụrụ na-enweghị ọrụ a, mgbe ahụ a ga-ehichapụ ndekọ ahụ na mbido, na mbụ-ụzọ.
2. Ọ na-emepụta nsogbu mmegharị maka ụfọdụ ndị isi.
Mgbe mmadụ gwa gị ka ịmalite ozugbo ịrụ ọrụ gị dị iche iche mgbe ị tinyechara afọ 10 ma ọ bụ 20 n'ọrụ, mgbe ahụ ọ na-eme ka ọrụ gị na obodo nwee obere ahụ erughị ala. Mgbanwe bụ ihe ịma aka mgbe niile, ọbụlagodi n'ọnọdụ kachasị mma. Ihe a rụpụtara dị mma na igwefoto uwe ojii, mana a na-ebu ụzọ nwee mgbagha mbụ site n'aka ndị isi ndị agha ndị agha. Ọ bụrụ na ngalaba na-agbago ngwa ngwa na teknụzụ a n'ihi nrụgide sitere na mpụga nke ọha na eze, mgbe ahụ enwere ike bulie ọghọm ebe a ọtụtụ ugboro. Ngalaba aghaghi imepụta iwu ga na-ekwu n’ụzọ doro anya na otu n’otu esi achịkọta vidiyo, echekwa ma jiri ya. Ekwesiri ichekwa ego tupu ewebata ike n'igwe. Ọ bụ usoro anaghị eme n'otu ntabi anya, ọbụlagodi na enwere ụlọ ọrụ na-eme ike ha niile ịme mmezu nke teknụzụ a.
3. Okwu teknụzụ nwere ike igbochi iwu nke igwefoto ahụ mmadụ ịrụ ọrụ oge ụfọdụ.
Igwefoto ahụ nke ndị uwe ojii bụ teknụzụ, dịka ekwentị, laptops, ma ọ bụ ụgbọala. E nwere oge mgbe akụrụngwa a ga-akụtu, ọ na - abụkarịkwa n'ọnọdụ kachasị njọ. Batrị nwere ike ịnwụ na-enweghị ihe kpatara ya, enwere ike ịnwe mgbochi na oghere igwefoto, ma ọ bụ ihe vidiyo vidiyo nwere ike ghara ịchekwa. Enwere ike mebie akụkụ na ọgụ na ọdịda ndị ọzọ na-adị. Ihe nsonaazụ a nwere ike ibute nkwupụta ịgba àmà efu, nyocha omume n'ọhịa, yana nchegbu mkpokọta ihe akaebe ndị nwere ike imetụta nsonaazụ nke ụfọdụ ikpe.
Nchebe na nchedo nzuzo
1. Usekwụ na-eduhie eduhie
Ọ bụrụ na onye uwe ojii nọ n'okpuru onye uwe ojii, idekọ nhọrọ nwere ike iduga ebubo ebubo vidiyo vidiyo na-eduhie, wepụghị ya na ọnọdụ, ma ọ bụ jiri ụma were iji nweta amamikpe mana idekọ oge niile nwere ike imebi emebi ma wepụ ikike ndị uwe ojii. ndị ọrụ iji uche ha mee ihe. Ọ bụrụ na ha na-ese kamera, ha nwere ike iche na ha kwesịrị ịchụ obere obere mmebi, nke ha nwere ike ime n'ụzọ dị iche. N'inye agụụ maka njide nke ndị omempụ ejidere, enwerekwa ihe ize ndụ nke vidiyo na-atọpụ, na-apụ apụ ma ọ bụ na-ekerịta nke ọma na nke a ga-abụ mmebi nzuzo nke nzuzo. Departfọdụ ngalaba na-ahapụ ndị ọrụ uwe ha gbanyụọ igwefoto ha n'oge oge nsogbu, mana ọghọm a pụtakwara na ọ ga-abụ na teknụzụ agaghị etinye aka n'oge ọnọdụ mberede. Otu ndị America ka na-alụ ọgụ ime ka nguzozi nke chọrọ nghọta na ikike nke Ndozi Nke Anọ nyere.
Ndị ụlọ ọrụ mmanye iwu ga-eji ụdị ngwaọrụ a ezochiri nke ọma, anaghị etinye ihe ndozi n'ime ya na nchekwa nchekwa mpụga ka kaadị SD iji chekwaa vidiyo ogologo.
2. Ndị ọrụ nchekwa
Igwefoto ndị uwe ojii na-ebelata nchekwa nke ndị uwe ojii ma na-emetụta ahụike na nke uche ha n'ụzọ na-adịghị mma. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-emeghachi omume na-adịghị mma ọbụna na-eme ihe ike na ndị uwe ojii na-ese, ọkachasị ndị nwere ike ị drunkụ mmanya, ọgwụ, ma ọ bụ na-arịa nsogbu ahụike uche. Nkwupụta sitere na Homelọ Ọrụ UK Home kwuru na nsogbu ahụike na nchekwa nwere ike iji kamera ndị na-eyi ahụ gụnyere isi ma ọ bụ olu olu, mkpọtụ eletrik site na ngwa mebiri emebi, yana ọdịda redio ma ọ bụrụ na ejiri kamera na redio na-akpachi anya.
3. Nzuzo nke ụmụ amaala
Ndị ọrụ nchekwa iwu na ụmụ amaala na-adabere na ibe ha iji belata mpụ. Agbanyeghị na obodo na-adabere na ndị uwe ojii maka nchebe, ikike nke ndị uwe ojii ịlụ ọgụ nke ọma ma dozie mpụ na-adabere na mmekọrịta ha na obodo ndị ha na-eje ozi. Mmekọrịta a chọrọ nkwado nke onwe site na ime obodo site na irubere iwu na ịnabata ntuziaka site n'aka ndị uwe ojii.
Ọ bụ ihe nwute, n’oge na-adịbeghị anya, mmekọrịta dị n’etiti ndị uwe ojii na obodo ha akawo njọ n’ụwa niile. Igwefoto uwe ojii na-awakpo nzuzo nke ụmụ amaala, na-ekpughe ndị ọ metụtara na ndị akaebe banyere mpụ, ma na-emebi mmekọrịta ndị uwe ojii na nke ọha. Ordingdekọ ihe ndị uweojii na-eme n'ihu ọha nwere ike iduga ọha ekpughe ọnọdụ ọnọdụ ahụike nke onwe, ndị a kpara arụ dị ka ndina n'ike ma ọ bụ mmetọ ụlọ, ndị akaebe na-atụ egwu mmejọ site n'aka ndị omempụ, na ndị na - akọ akụkọ - kachasị na steeti nwere iwu na-enye ohere ịnweta ọha mmadụ n'ihe nkiri.
Nchegbu onwe onye doro anya bụ nke ndị nkịtị ndị uwe ojii sere. Ọ bụrụ na eserese sitere na kamera ahụ ndị uwe ojii ka ana-ahụta dị ka ndekọ ọha, enwere ike ị nweta ọtụtụ eserese nke mmekọrịta ndị na-emeghị ihe ọjọọ na ndị uwe ojii. O siri ike iche n'echiche ọnọdụ nke ndị uwe ojii yi kamera na-abanye n'ụlọ mmadụ ma pụọ ​​na-enweghị ijide onye jidere. Vidio nke nzute ahụ nwere ike ikpughe ihere ma ọ bụ ozi nzuzo banyere onye nwe ụlọ. (Feeney, 2015)
Usoro a na-enyekwa onye uwe ojii ohere ijide vidiyo nke ihe niile mere na ọ nwere ike ịnye ọnọdụ maka ihe merenụ, mmebi ahụ nwekwara ike ime ka ihichapụ ihe akaebe ahụ. Recordingdekọ oge niile ga-apụta na ọrụ ndị uwe ojii kwa ụbọchị ga-edekọ ọrụ ha, ha ga-aza ajụjụ zuru oke maka omume ha. Mana ọ pụtakwara na ọtụtụ ndị otu, ndị na-etinyeghị aka na mpụ, ga-ejide ihe nkiri ma nke a ga - abụ itinye aka na nzuzo na nzuzo.
4. Ndị ọrụ ọrụ nsogbu
Ndị uwe ojii nwere ike na-eche na ụfọdụ ihe igwefoto weghaara nwere ike imebi ọrụ ha ma ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, ha na-ekwupụta akụkụ gbasara onye nlekọta. Mgbe ụfọdụ ndị uwe ojii anaghị eme ihe ike mana ha na-ekwu okwu n'olu dara ụda na igwefoto na-egosi ha na-akparị ndị mmadụ, ụdị ihe ahụ nwere ike ibibi ọrụ ndị uwe ojii.
Enyochawo mmekọrịta dị ukwuu nke mmekọrịta ndị uwe ojii na ọtụtụ afọ gara aga, dabere na ọtụtụ ihe ngosipụta dị elu metụtara ojiji nke ike. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị nkịtị, na ezinụlọ nke ndị a kpọkuru akpọọla oku maka ndị ọrụ mmanye iwu ka ha dozie ndị ọrụ obodo ka kamera ahụ na-eme ka ha nwekwuo nghọta na ịza ajụjụ. Ọsọ na mberede iji kwalite ndị uwe ojii jiri teknụzụ ọhụụ a mee ka ụfọdụ ajụjụ na nchegbu banyere okwu nzuzo.
Ọ bụ ezie na ihe niile dị n'elu nchegbu ahụ apụtaghị na a gaghị eji BWC mee ihe. Ndị uwe ojii ahụ na-eyiri kamera nwere anụ ahụ maka imepụta ntụkwasị obi na ndị uwe ojii na-anwa ime ụdị mmekọrịta ọhụrụ n'etiti ndị uwe ojii na obodo. Teknụzụ niile nwere mmetụta dị mma na nke na-adịghị mma, yabụ na ụbọchị ndị a, enwere igwefoto kachasị ọhụrụ nke anaghị emeri nchegbu niile mana enwere ike belata ha.
Ngwaahịa, H. /., Nd Omega Ndị Nweta Iwu Omega Ahụ - Igwefoto-Worn Camera (DVR / WIFI / 3G / 4G) / Nchịkwa Ihe Nweta Digital - Singapore. [Na ntanetị]
Abdollah, nd Policeone.com. [Na ntanetị]
E Nwere na: http://www.policeone.com
Feeney, M., 2015. INWE CATO INSTITUTE. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.cato.org/blog/police-body-cameras-raise-privacy-issues-cops-public
Kissiah, M., 2019. eInvestigator.com. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.einvestigator.com/police-body-cameras/
Ruiz, J., 2015. Igwefoto uwe ndị uwe ojii na-eyi nchekwa na nchedo nzuzo. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.openrightsgroup.org/blog/2015/police-body-worn-cameras-raise-security-and-privacy-concerns
Nzuzo 7078 3 Echiche Taa